Horudhac: Bournemouth vs Liverpool… (Reds oo indhaha ku haysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka Premier League) – Gool FM
Tababare Pep Guardiola oo ka tagaya Man City… (Kooxdee ku sii jeedaa, ma PSG, Barcelona mise Juventus?)
“Alexander-Arnold wuxuu ku guuleysan karaa abaal-marinta Ballon d’Or” – Halyeey reer Brazil ah
Haaruun December 7, 2019
(Bournemouth) 07 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta ee Bournemouth ayaa noqon karta kooxdii ugu dambeysay ee joojisa guulaha xiriirka ah ee kooxda macallin Jurgen Klopp ee Liverpool, kulanka kooxda hoggaaminaysa horyaalka Premier League ay maqribnimada maanta oo Sabti ah booqanayso garoonka Vitality Stadium.
Reds ayaa kaliya labo dhibcood lumisay 15-keedii kulan ee ugu horreeyey horyaalka Premier League, waxaana ay haatan hoggaaminaysaa horyaalka Ingiriiska, waxaana ay indhaha ku haysaa inay guul ka soo la soo qaadato Cherries oo ay sii wadato guulaheeda xiriir ah.
Taariikhda: Sabti, 07 Dis 2019
Garsooraha: Christopher Kavanagh (England)
Garoonka: Vitality Stadium
Xiddiga kooxda Bournemouth ee Adam Smith ayaa dhaawac canqowga ah qaba, halka gooldhalinaya ugu sarreeya kooxda ee Harry Wilson uusan wajihi doonin kooxda milkiyaddiisa iska leh ee Liverpool.
Steve Cook ayaa sii wadan doona maqnaanshihiisa garoonka kaddib markii uu garabka ka jabay kulankii Spurs ee isbuucii hore, halka Joshua King uu isna dhaawac muruqa ah ku maqan yahay.
Dhinaca kale kooxda Liverpool ayaa soo dhoweynaysa goolhayaheeda koowaad ee Alisson kaddib markii uu la maqnaa ganaax kaarka casaanka ah oo uu qaatay, mana jiraan wax dhaawacyo cusub ah oo haysta kooxda.
Joel Matip ayaa sii wadan doona dhaawaca jilibka ah oo uu la maqan yahay, waxaana maqnaanshaha kooxda Reds ku wehlinaya Fabinho iyo Nathaniel Clyne.
>- Bournemouth ayaa guul la’aan ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League la ciyartay Liverpool, waxaana ay ka haysataa 1 barbaro iyo 4 guuldarro tan iyo markii ay 4-3 ku garaaceen bishii December ee sanadkii 2016, The Cherries ayaana laga dhaliyey ugu yaraan labo gool mid kasta oo ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajaheen Reds.
>- Liverpool ayaa guuleystay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League la ciyaartay Bournemouth, iyadoo cel-celis ahaan ka dhalisay 14-0, waxaana ku jira labo gool oo in 4-0 oo ay kaga gaartay garoonka maanta lagu ciyaarayo ee Vitality Stadium.
>- Liverpool ayaa guuleystay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay la ciyaartay Bournemouth iyadoo mid waliba dhalinaysay 3 gool ama ka badan, weligood ma gooleysan shan kulan oo xiriir ah oo ay ka horyimaadeen koox ka soo horjeedda sidaan oo kale.
>- Bournemouth ayaa khasaaro la kulantay mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, dhammaan kulamadaas ayayna dhaliyeen hal gool, markii ugu dambeysay oo laga badiyay shan kulan oo isku xigta oo horyaalka ah waxay ahayd bishii Maarso sanadkii 2013, iyagoo ahaa koox League One ah.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 27 kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League inta lagu guda jiro 2019, markii ugu dambeysay oo ay kulammada sare ee horyaalka guulo intaas ka badan gaaraan sanad gudihiisa waxa uu ahaa sanadkii 1987-kii, markaasoo ay 28 guulo ah gaareen.
>- Kooxda Liverpool ayaa guuleysatay 18 ka mid ah 19-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo la baastay maalin sabti ah saacadaan oo kale, halka kulan ee kalena barbaro ayay galeen, waxaana kulamadaas ku jira 16-keedii kulan oo ay si xiriir ah u badiyeen.
>- Xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa gool dhaliyey dhammaan afartii kulan oo uu horyaalka Premier League ku wajahay Bournemouth, waxaana uu wadar ahaan ka dhaliyey kooxdan lix gool kulammada horyaalka, waa kooxda kaliya oo uu jecel yahay inuu 100% goolal kaga dhaliyo tartankan.